Manatsara ny fandaharam-potoana fitsangatsanganana mialoha ny United Airlines
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Manatsara ny fandaharam-potoana fitsangatsanganana mialoha ny United Airlines
United Airlines androany nanambara fanatsarana ny United PassPlus, ny programa mialoha ny zotram-piaramanidina izay manolotra fihenam-bidy, saran-dalana ary kojakoja ilaina ho an'ny mpanjifa tsirairay sy orinasa. United dia hifindra amin'ny PassPlus amin'ny faran'ity taona ity any United Jetstream, vavahadin-tsoratry ny indostrian'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa sy hahafahan'ny mpanjifa mpandraharaha misimisy kokoa mitantana ny vokatra sy ny diany.
"PassPlus no vokatra voaloa mialoha be indrindra indrindra eo amin'ny sehatry ny indostria noho ny safidy vidiny telo samy hafa izay manome ny fitambarana fitehirizana, ny fahaiza-maminany ary ny fahalalahana ho an'ny mpanjifa," hoy i Glenn Hollister VP Sales Strategy sy Enablement ao United. "Ny fampidirana azy ao amin'ny United Jetstream dia mitondra any amin'ny ambaratonga manaraka ity programa ity: ny mpanjifa dia afaka mitantana mavitrika sy mandinika ny fomba fampiasan'izy ireo ny tombontsoany ary ny fomba fampiasan'izy ireo ny vokatra ao amin'ny magazay tokana."
Raha vao mifindra any United Jetstream ny PassPlus dia afaka mampiasa ny vavahady ny mpanjifa rehetra:
• Mampihatra dolara fidiram-bola mankany amin'ny MileagePlus Premier, mpikambana ao amin'ny United Club ary maro hafa
• Jereo ny fifandanjana tena izy sy ny fanaovana tatitra momba ny vola amidy sy vola mialoha
• Manampia vola amin'ny dia sy fizahan-tany momba an'i United sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy
• Jereo sy havaozy mandeha ho azy ny fifanarahana PassPlus
Ny United Jetstream koa dia hahatonga azy io ho milamina kokoa ho an'ny mpanjifa vaovao hiditra sy hankafy ny tombontsoa azo avy amin'ny PassPlus. PassPlus dia azo ampifandraisina amin'ny fifanarahana orinasa efa misy, ary ny mpanjifa misafidy ny hanampy PassPlus Exec amin'ny portfolio-n'ny vokatra dia hanana fidirana mora foana amin'ny fitantanana ny fifanarahana vokatra roa an'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fidirana United Jetstream tokana. Ny olona liana amin'ny fidirana amin'ny PassPlus dia afaka manaraka ny fisoratana anarana manokana hisafidianana ny safidy mety ho azy ireo amin'ny tsindry kely vitsivitsy. United Jetstream koa dia hanokatra ny fahafaha-manao fanampiny hanamboarana singa ao amin'ny programa hahatonga ny PassPlus hahasoa kokoa ho an'ny olona sy ny orinasa amin'ny habe rehetra.